YouTube मा तपाईंलाई रुचि नरहेको भिडियो वा च्यानलहरू कसरी मेटाउने ग्याजेट समाचार
यदि तपाईं नियमित रूपमा YouTube प्रयोग गर्नुहुन्छ, निश्चित रूपमा तपाईंले निम्न अवस्थाको सामना गर्नुभएको छ। तपाईं प्रख्यात वेब प्रविष्ट गर्नुहोस् र गृह पृष्ठमा तपाईले धेरै सुझावहरू फेला पार्नुहुन्छ, भिडियोहरू र च्यानलहरू जुन तपाईंको लागि रूचि हुन सक्छ। अहिलेसम्म नराम्रो होइन, केवल थुप्रै केसहरूमा ती सुझावहरू जुन वेबले हामीलाई दिन्छ हाम्रो चासोको विषय होईन, तिनीहरू कलाकार वा च्यानलहरूबाट पनि हुन् जसले हामीलाई रिस उठाउँछन्।
हामी यस प्रकारको केसमा के गर्न सक्दछौं? YouTube मा हामी गर्न सक्छौं प्रत्येक भिडियो वा च्यानलमा चिन्ह लगाउनुहोस् जुन हाम्रो रुचिमा छैन, तर यो एक प्रक्रिया हो जुन केही केसहरूमा लामो हुन सक्दछ। नयाँ सुझावहरूलाई जन्म दिनको साथसाथै जुन हाम्रो लागि रूचि पनि नहुन सक्छ। त्यहाँ एक विस्तार को रूप मा एक समाधान छ।
प्रश्नमा यो विस्तारलाई भिडियो अवरोधक र भनिन्छ हामी दुबै गुगल क्रोम र मोजिला फायरफक्समा प्रयोग गर्न सक्छौं। यसको विचार यो छ कि हामी ती भिडियोहरू वा च्यानलहरू ब्लक गर्न वा हटाउन सक्षम हुनेछौं जुन हामीलाई रुचि छैन। यस तरिकामा, जब हामी YouTube वेबसाइटमा प्रवेश गर्छौं, हामीले यी समाग्रीहरू कुनै पनि समयमा देख्नुपर्दैन।
विस्तारको साथ हामी तिनीहरूलाई वेबमा सिफारिस वा सुझावहरूबाट हटाउन सक्षम हुनेछौं। अरु के छ त, तिनीहरूलाई खोजबाट हटाउन पनि सम्भव छ। तसर्थ, यदि त्यहाँ एक कलाकार, च्यानल वा गीत छ जुन तपाइँ तपाइँको सबै शक्तिशाली संग घृणा गर्नुहुन्छ, तपाइँ यसलाई यस तरीकाले पूर्ण रूपमा मेटाउन सक्नुहुन्छ, तपाइँले फेरि कहिले पनि फेला पार्नुहुने छैन जब तपाइँ वेब प्रयोग गर्नुहुन्छ।
1 यूट्यूब भिडियो वा च्यानल हटाउनुहोस्
2 तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको सूचीहरू नियन्त्रण गर्नुहोस्
यूट्यूब भिडियो वा च्यानल हटाउनुहोस्
यस मामलामा हामीले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो ब्राउजरमा विस्तार डाउनलोड गर्नुहोस्। यदि तपाईं गुगल क्रोम प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यो लिंक जबकि तपाईं एक मोजिला फायरफक्स प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यो लिंक। त्यसैले हामी यसलाई हाम्रो ब्राउजरमा स्थापना गर्दछौं र त्यसपछि हामी यसलाई प्रयोग गरेर यूट्यूब प्रवेश गर्न तयार छौं। तपाईं देख्नुहुनेछ कि विस्तारको प्रयोग एकदम सरल छ।
जब हामीले यसलाई स्थापित गरेका छौं र हामी वेबमा पहिले नै छौं, हामीले एक्सटेन्सन आइकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ, जुन हाम्रो ब्राउजरको माथिल्लो दायाँ भागमा अवस्थित छ। त्यसो भए, यसमा हामीसँग पाठ प्रविष्ट गर्न बार छ, जुन च्यानल, गायक वा गीतको नाम हुन सक्छ। यस पट्टीको छेउमा हामीसँग एउटा बटन छ जसले हामीलाई छान्नको लागि अनुमति दिन्छ यदि हामी खोज्दैछौं त्यो च्यानल वा भिडियो हो, ताकि यो खोज छिटो र अधिक कुशल छ।
हामीले हटाउन चाहेका सबै कुरा, हामी यसलाई हाम्रो सूचीमा थप्दैछौं, नीलो बटनमा क्लिक गरी क्लिक गर्नुहोस् जो थप्नुहोस्। यस सूचीले सबै सामग्रीहरू भेला गर्दछ जुन हामीले हाम्रो खातामा अवरुद्ध गरेका छौं, जब हामी युट्यूब प्रवेश गर्छौं ती हेर्न हामीलाई रोक्दछ। हामीसँग यसमा सामग्री थप्नको लागि सीमा छैन। थप रूपमा, यदि कुनै पनि समयमा हामी एकको बारेमा हाम्रो मन परिवर्तन गर्‍यौं भने हामी यसलाई सिर्जना गरेका सूचीबाट हटाउन सक्दछौं। त्यसोभए हामीसँग गर्ने कार्यलाई अनडू गर्ने हामीसँग सँधै सम्भावना हुन्छ।
तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको सूचीहरू नियन्त्रण गर्नुहोस्
विस्तारमा हामीसँग केही विकल्पहरू उपलब्ध छन्, यसले हामीलाई के गर्छौं व्यवस्थित गर्न अनुमति दिनेछ। त्यसकारण यदि हामीले युट्यूब सामग्रीको साथ सूची सिर्जना गरेको छ कि हामी ब्लक गर्न चाहान्छौं भने हामी त्यो सूची कुनै पनि समयमा प्रविष्ट गर्न सक्दछौं र त्यसमा हामीले के सामग्री प्रविष्ट गरेका छौं हेर्न सक्छौं। त्यसोभए हामी हेर्न सक्दछौं कि हामीले यसमा जे थपेका छौं सही छ, वा हामीले केहि चीज राखेका छौं जुन यस सूचीमा हुनुहुन्न।
थप रूपमा, हामीसँग एक सुरक्षा विकल्प छ जुन यस अवस्थामा चासोको विषय हो। यसले हामीलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति दिनेछ जोसँग यी सूचिको पहुँच छ YouTube मा ब्लक गरिएको सामग्रीको। त्यसोभए यदि तपाइँले तपाइँको कम्प्युटरलाई अर्को व्यक्तिसँग साझेदारी गर्नुभयो भने, तपाइँले छोड्न वा केवल अर्को व्यक्तिलाई पहुँच गर्नबाट रोक्नुहुनेछ। यो केहि चीज हो जुन प्रत्येक प्रयोगकर्ताले एक्स्टेन्सनमा आफ्नै मनपर्दोलाई सरल तरीकाले प्रबन्ध गर्न सक्दछ। यो राम्रो लाग्दछ कि तपाईसँग त्यस्तो अनुकूलन क्षमताहरू छन्।
यदि हामी हाम्रो सूचीबाट केहि सामग्री हटाउन चाहान्छौं भने हामी त्यसलाई प्रत्येक प्रविष्टि वा सामग्रीको दायाँ पट्टीमा हेर्न सक्दछौं। हामी मेट्न विकल्प पाउँछौं, अंग्रेजीमा पाठ मेट्नुहोस्। यस विकल्पमा क्लिक गरेर हामी यो सामग्री हटाउन सक्छौं, यो च्यानल वा भिडियो हो, यस सूचीबाट, फेरि यूट्यूबमा उपलब्ध गराउँदै। यदि हामी यसमा के चाहन्छौं भने सम्पूर्ण सूची मेटाउनको लागि हो भने, हामी क्लियर विकल्प प्रयोग गर्न सक्छौं, जसले हामीले प्रविष्ट गरेका सबै भिडियोहरू र च्यानलहरू मेटाउनेछ। यो एक सहज विकल्प हो, यद्यपि यस अवस्थामा बढी कट्टरपन्थी।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, भिडियो अवरोधक एक धेरै उपयोगी विस्तार हो, प्रयोग गर्न सजिलो छ र जसको साथ तपाईले सबै कुरा हटाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई रूचि नभएको सबै कुरा हटाउन सक्नुहुन्छ जब तपाइँ तपाइँको कम्प्युटरमा युट्यूब प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईंको ब्राउजरको लागि यो विस्तारको बारेमा तपाईं के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » यूट्यूब भिडियो र च्यानलहरू मेटाउनुहोस् जुन तपाईंलाई यो विस्तारको साथ रूचि राख्दैन